RAVELOSON CONSTANT : NY LOHALAHARANA AMINTSIKA DIA NY FAMPODIANA AN’I DADA SY NY FAMPANDANIANA AN ‘I ROBINSON – MyDago.com aime Madagascar
Ny fandresentsika hoy ny Ct Raveloson Constant androany teny amin’ny Magro Behoririka dia tafita ny kandidantsika ary tafaverina eto ny filoha Ravalomanana. Izaho hoy izy dia malahelo an’I Hery izay mpifanandrina amintsika nefa hetraketrahan-dry zalahy namany. Rehefa manao fifidianana dia manao fifidianana. Aza sotasotaina ny fifidianana hoyizy fa izahay no tompon’ny fifidianana izao. Aleo izy ho resy lahatra fa resy tsara.Mahazo manolotra depiote Hery rehefa Robinson no lany ho filoham-pirenena eo, zon’ny Hery izany. Fanontaniana no napetrany hoe : fa maninona no sotasotaina sa sao Robinson no finganinana?Ny tiany atao hoy Constant dia miara miainga dia miara mitontona. Aleo handeha ny fifidianana fa aoa anatin’ny tondrozotra dia milaza far aha misy filoham-panjakana ka tsy mahatazona ny tsyfitanilana dia tsy izy izyizany, raha misy hors jeu dia Rajoelina. Misy jeneraly namantsika ihany koa hoy izy izay mbola mitsabo tena any ivelany, tongava haingana ianao vonjeo ny firenena, ary smabory Rajoelina fa manakorontana ny fifidianana, satria ianareo efa nilaza far aha misy manakorontana dia pehanay. Esorintsika amin’ny fifidianana ny mpanongam-panjakana, ary isika tsy manaiky ny hiara hitantana sy miara midoboka izany. Ny fifidianana hoy izy dia tsy maintsy mandeha fa tsy hoe tsy mety aminay ny fitantanana ao anatin’ny fizarana. Tsy mety io hanaovandry zalahy azy io noho izany hoy ity mpanao politika ity dia ny naman’I Hery dia aoka hihetsika, arovy hery, rariny hoy izy raha hanao fihodinanana faharoa izy satria be ny elanelana eo aminy sy ny fahatelo. Fahotana hoy Constant no tiany Rajoelina atao dia io ataony io filohan’ny teetzamita nefa te hanana soavaly, ary hanangana plate forme hanohana azy nefa tsy azo atao izany. Momba ny tolona anatiny dia nambarany fa aza faly fotsiny amin’izany isika , fa ny fahadiovantsika, ny fahaizantsika, ny fanahy tsara no aoaka hisongadina. Aza avela matory fotsiny ny fisoratana anarana eny amin’ny fokontany fa miroso amin’ny lalona dia ny fanaovana delege. Ho antsika lohandohany hoy izy ny resaka izao dia ny fodian’I Dada izany hoe ny maha voafidy an’I Robinson no lohalaharana fa rehefa tsy izay dia miady amiany ianareo. Tsy isika samy depiote hoy izy no ifanilika ny amin’ny hoe izaho ny nahazo taratasy fa miady isika. Amin’ity fihodianana faharoa ity dia aoka isika heady amin’ny ramasambomanga, mahaiza mamantatra ny Havana raha misy patsa, izay mandevina ivoho. Tato anatin’ny tapabola izay hoy izy dia lasa tsy lohalaharana amintsika ny fampodiana ny filoha Ravalomanana sy ny fampandaniana an’I Robinson, tsy hoe adalanay teto nandritra ny dimy taona ka avy aty afara indray no miseho ho lohany. Tsy ilay olonaankory hoy Constant no andomboka ga ilay fihetsika no ahitsy.
Auteur Solo Razafy*Publié le 13 novembre 2013 Catégories Politique
17 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : NY LOHALAHARANA AMINTSIKA DIA NY FAMPODIANA AN’I DADA SY NY FAMPANDANIANA AN ‘I ROBINSON”
IO AZA FA HANOMBOKA NY FANIPIAZANA
14h40 CES :
la requête de Rakoto Rahasinina Andrianjo RAZANAMASY, aux fins de disqualification du candidat Hery RAJAONARIMAMPIANINA, est rejetée.Date : 13/11/2013
Tany masina io oah fa izay manao ratsy ao ihany no ho VIZANA e!!!
tsisy afa-bela izany eo, avelao hiasa ANDRIAMANITRA, IZAY HIFANOSEHANY ANY
FA SAMY JIOLAHY ary tompon’antoka tsara @ izao fahavoazan’ny FIRENENA izao daholo ireo.
MBA NISY NIANTRA VE IREO T@ FIATRAIKAN’IZAO ASA RATSINY IZAO? KOA MANINONA NO TSY MAINTSY
HIANTRANA FA MAMPALAHELO????
raha tsy hijery afa-tsy ity AIR MAD ?????ny sisa tsy lazaina intsony sady @’izay izy indray no miseho inona MIZARA2
VOLA????VOLAn’IZA ITY ZARAINA ANEFA???MITONON-TENA!!!ireny HERY ireny no tena MPISOLOKY AVO LENTA
ary tsy MIVADI-TROVANA TSY TĖ HALALA NY MBA FIATRAIKANY MIHINTSY @ VAHOAKA,avelao ho hitan’ny HAVANY
eo,aleo hitambaran’ny alika any fa SAHAZA AZY TSARA IZANY ary mbola ho avy koa ny MANARAKA.
Manohana ano R, Constant, fa aza hadinona ny jeneraly Raoelina mbola any am-ponja ary aoka hiverina i NAIKA ELIANA. Aleo hiala eo akaikin’i JLR33 @ izay ilay kotovelo iry fa manao sous-marin an’ilay rajoelina fotsiny.
EKENA 100% ry AKAMA a!!!
Manoana anao 100% ny aty.
RAMATOA NAIKA MIVERINA
Azo atao alohan’i fahalanian’i dokotera Robinson koa ireo raha ny tena izy fa saingy
iza no antenaina hanao izany eo ???TSA MISY an!!! toa efa misy ady seza sahady
koa ary any ho any HONO an!!!
Ny CSC fa iza indray ? Efa ENTITRA BE RY ZAREO IZAO, RAHA VAO MISY TSY FAMPIARANA NY FEUILLE D’ DEROUTE !
Aza mba mamorona eo lesy fa tssss
Maka afo @ maty sa miantehitra hazo boboka???
Ingahy Franssmann aza toa tsy hita mbamin’ny dia-tongony, voky izy dia natory
Fa ianao angaha tsy mba manaraka vaovao ê ? Efa masiaka be izao ny CSC !
Ny tondrozotra iray manontolo tsy fantany aloha izany ê !! Fa raha resaka fifidianana, dia tena kapoakany ny miaro an’izay mandika Lalàna !
TSY NISY HONO NY FANGALARANA
ITY MISY HIRA IZAY ATOLOTRO HO ANY I ZANAKY I DADA/ROBINSON REHETRA TSY MISY ANKANAVAKA.
Misaotra anao Rasamy !
Mitohy ny fanitsakitsahana an’ilay Tondrozotra hoy aho, fa tsy hitan’ny CSC izany satria ny azy izany Fanaraha-maso sy fampiarana izany, dia zavatra hafa dia hafa mihintsy !
Dia ahoana indray itony r’Ingahy Péri, sa dia sitrak’Andriamanitra ka no izany dia tsy maintsy tanterahina ?
Izao ve mbola azo lazaina hoe « gestion des affaires courantes », amin’izay tsy mba hoe « contrat d’exploration » fa tonga dia « contrat d’exploitation » ?
Lany vola tamin’ny fanohanana an’ilay Fery vao angaha ny fitondràna sa dia mitady an’izay hahitàna vola faramparany ilay ao Ambohitsirohitra alohan’ny hitsoahana ?
Ho feno indray izany ny sobika ao ambany latabatra, na dia tsy ho tanteraka aza ny fanirian’ireto kely maso ireto !!
Tena hafa mihintsy ny holazaina. Toa tapaka be ny site tim-madagascar.org
Satria tsy zakan’ny foza, ny filazàna ny marina ! Na inona anefa ezaka ataon’ny foza, dia tsy hahasakana ny tia tanindrazana ary mpandala ny ara-dalàna hifanerasera izany teti-dratsiny izany !
Misokatra foana, ho an’izay tena tia tanindrazana ny site sy ny forum TIM ( TIM miaraka amin’ny Filoha Ravalomanana, fa tsy ry Raieaumilieu ) !
F’ angaha tsy efa lasan’i VAKITAMPONA ambongadiny TIM lesy???
Efa LAFON’ NY SASANY dia natakalo ZANAK’i Dada???
TSAMBO dit :
Tandremo mihitsy fa efa misy ny ady sisiny sy ny ady seza. Ny fifidianana tsy vita akory, ary vao lisitra apetraka dia efa misy daka @ vavaranjo !
Tsy mandeha ho azy ny hoe « mahaiza mamantatra ny havana raha misy patsa izay mandefona ivoho ». Raha ny fahitako azy ny olona manodidina akaiky no resahina @izany fa tsy dia ny lavitra efa fantatra fa mpifaninana na fahavalo mihitsy !
16 novembre 2013 à 21 h 54 min
Ny politiques hono (les hommes politiques), arakaraka ny hananany hevitra goavana @ vahaolana ho eo @ fiaraha-monina no hananany fahalemena goavana ihany koa @ fiainany. Ka manararaotra an’io ny sasany mamandrika azy. Jereo ny nanjo an’i Simao nanaovan’ny foza azy teto raha tsaroanareo !
Précédent Article précédent : MISORATA ANARANA ENY AMIN’NY FOKONTANY ISIKA TSY AFAKA NIFIDY TEO
Suivant Article suivant : Mandrovitsihy ny ao Ambohitsirohitra